हालसम्म विगत भन्दा २३ प्रतिशत रोपाईमा कमी – Rastriya Yuvajagaran News
हालसम्म विगत भन्दा २३ प्रतिशत रोपाईमा कमी
२ श्रावण २०७६, बिहीबार १८:३७07
विराटनगर, ०२ साउन २०७६ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष झण्डै २३ प्रतिशतले रोपाई कम भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये उच्च पहाडमा गतवर्ष ६६।२२ हुदा यस वर्ष ५१.८१, मध्य पहाडमा गतवर्ष ६७।०४ हुदा यसवर्ष ५३।९६ तथा तराईका जिल्लाहरुमा गतवर्ष ६२।६५ प्रतिशत हुदा यसवर्ष ३५.१२ प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको छ ।
प्रदेश १ मा ३६ प्रतिशत रोपाई
प्रदेश नं.१ मा गत बर्षको तुलनामा कम रोपाँई भएको छ । असार मसान्त सम्ममा ३६ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै रोपाँई भएको हो ।
ढिलोगरि सुरु भएको बर्षाका कारण गत बर्षको तुलनामा कम रोपाँई भएको कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरले जनाएको छ । गतबर्ष असार मसान्तसम्म प्रदेश नं। १ का तराइका जिल्लामा ४५ प्रतिशत र पहाडी जिल्लामा सतप्रतिशत रोपाइ सम्पन्न भएको प्रदेश नं १ को कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत हृदयराम पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लामा असार मसान्तसम्म ३८ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सप्पन्न भएको छ । सो जिल्लामा ८ हजार ७३६ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइ हुनुपर्नेमा ३ हजार ३२० दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ ।
यस्तै संखुवासभा जिल्लामा ४० प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ । त्यो जिल्लामा १३ हजार ८५१ हेक्टरमा रोपाइँ हुनेमा ५ हजार ५४० दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ ।
सोलुखुम्बु जिल्लामा रोपाइ हुनुपर्ने जमिनको ३० प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ । सो जिल्लामा १ हजार ५२५ हेक्टरमा रोपाइहुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ४५७ दशमलव ०५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइ सम्पन्न भएको छ । यसैगरी पाँचथर जिल्लामा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइ सम्पन्न भएको छ । यो जिल्लामा ९ जहार २०३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइ हुनेगरेपनी हालसम्म ३ हजार २२१ दशमलव ०५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइ सम्पन्न भएको छ ।
पहाडी जिल्लाकै इलाममा ४५ प्रतिशत रोपाइ सप्पन्न भएको छ । यो जिल्लामा १४ जहार ८१५ हेक्टर जमिनमा रोपाइ हुने भएपनि हालसम्म ६ हजार ६६६ दशमलव ७५ प्रतिशत हेक्टरमा रोपाइ सम्पन्न भएको छ । अरु जिल्लाको तुलनामा भोजपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी रोपाइ भएको छ । यो जिल्लामा ६० प्रतिशत जमिनमा रोपाइ सप्पन्न भएको छ । त्यहा १८ हजार ९२ हेक्टर जमिन मध्ये अहिलेसम्म १० हजार ८५५ दशमलव २० प्रतिशत जमिनमा रोपाइ सप्पन्न भएको छ ।
तेह्रथुम जिल्लामा ४९ प्रतिशत रोपाइ सप्पन्न भएको छ । त्याहा १० हजार १७५ हेक्टरमा रोपाई हुनुपर्नेमा हालसम्म ४ हजार ९८५ दशमलव ७५ प्रतिशत हेक्टरमा रोपाइ सप्पन्न भएको छ । यसैगरी धनकुटा जिल्लामा हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै रोपाइ सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा ७ हजार ९५० हेक्टर जमिनमध्ये हालसम्म २ हजार ३८५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइ सकिएको छ ।
उता उदयपुर जिल्लामा हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ । सो जिल्लामा १३ हजार ३८० हेक्टरमा रोपाइ हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ४ हजार१४ हेक्टरमा मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ । यस्तै ओखलढुंगा जिल्लामा सबैभन्दा थोरै १२ प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ । उक्त जिल्लामा ४ हजार ४०३ हेक्टरमा रोपाइहुने गरेपनी अहिलेसम्म ५२८ दशमलव ३६ प्रतिशत जमिनमा रोपाइ सकिएको छ ।
खोटाङ जिल्लामा हालसम्म ४८ प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ । उक्त जिल्लामा धान रोपाइ हुने १२ हजार ८९८ हेक्टर जमिन मध्य अहिलेसम्म ६ हजार १९१ दशमलव ४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइ सम्पन्न भएको छ । यता तराइका जिल्लामा पनि गतसालको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ ।
जस अन्तर्गत झापा जिल्लामा हालसम्म ४२ प्रतिशत मात्रै रोपाइ सम्पन्न भएको छ । उक्त जिल्लामा ८७ हजार ५०० हेक्टरमा रोपाइ हुने मध्य ३६,७५० क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइ सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै सुनसरीमा २५ प्रतिशत मात्रै रोपाइ सम्पन्न भएको छ । सुनसरीका ५५ हजार हेक्टर जमिन मध्ये अहिलेसम्म १३ हजार ७५० दशमलव ११ प्रतिशतमा मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ ।
यसैगरी यता मोरङ जिल्लामै अहिलेसम्म ३० प्रतिशत रोपाइ सप्पन्न भएको छ । मोरङमा ८३ हजार ३०० हेक्टर धान खेती हुने जमिन मध्ये असार मसान्तसम्म २४ हजार ९९० हेक्टरमा मात्रै रोपाइ सप्पन्न भएको छ । गतबर्ष असार मसान्तसम्म पहाडी जिल्लामा ७५ प्रतिशत जमिनमा रोपाइ सप्पन्न हुने गथ्र्यो भने तराइका तीन जिल्लामा ४५ प्रतिशत जमिनमा रोपाइ सप्पन्न हुने गरेको कृषि निर्देशनालय बिराटनगरको तथ्यांक रहेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा रोपाइ सम्पन्न नहुनूको मुख्य कारण भने समयमा बर्षा नहुनु नै हो । समयमा रोपाइ नहुनाले सोचे अनुसारको उत्पादन नहुने हुदा सिजनमा धानको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ताले चामल किन्दा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने कृषि प्रसार अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
Related tags : Agriculture News
इटहरीमा परिवारै डेंगो संक्रमित, सम्बन्धित निकाय बेखबर
कांक्रोको खेति कसरी कहाँ गरिन्छ ?
यो खबर हेर्नुहोला । : "हालसम्म विगत भन्दा २३ प्रतिशत रोपाईमा कमी". यहाँ लिन्क छ : https://yuvajagaran.net/?p=18522. Thank you